सिरहामा अमर्यादित बन्यो कक्षा ११ को परीक्षा एउटै कक्षाबाट एक बोरासम्म चिट बरामद - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 National सिरहामा अमर्यादित बन्यो कक्षा ११ को परीक्षा एउटै कक्षाबाट एक बोरासम्म चिट बरामद
सिरहामा अमर्यादित बन्यो कक्षा ११ को परीक्षा एउटै कक्षाबाट एक बोरासम्म चिट बरामद
सिरहा, १ असार । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को बन्दको कारण एकातिर ११ कक्षाका विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्न सास्ती भएको छ भने अर्काेतिर आन्दोलनको माहौलमा चिट चोरी गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ । आन्दोलनको माहौलले गर्दा परीक्षाको मर्यादा कायम हुन सकेको छैन ।
राजपाले निर्वाचन रोक्न तराईमा आन्दोलन गरेको छ । आन्दोलनका कारण वजार, यातायात शैक्षिक संस्था आदि सवै ठप्प छ । तर यसको नाकारात्मक असर ११ कक्षाको परीक्षामा समेत परेको छ । परीक्षा मर्यादा विहिन तरिकाले संचालन भएको पाइएको छ । विद्यार्थीहरु गेस पेपर, गाईड बुक, र चिटसहित परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गरे । परीक्षा हलभित्र खुलेआम चोरी र नक्कल चलिरह्यो । परीक्षामा गार्ड वस्ने शिक्षकहरुलाई चिट र गाईड बुक खोस्न हम्मेहम्मे पर्यो । परीक्षा कोठा भित्रवाट वोराका बोरा गाईड बुक र चिट निस्केको छ ।
लहानस्थित ल.ल.कु. उच्च मावि र पशुपति आदर्श उच्च माविमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी अरविन्द लाल कर्णको निरीक्षण टोली पुगेपछि विद्यार्थीहरुवाट खोसिएको चिटले बोरा भरिएको छ । ति दुई केन्द्रबाट करिब पाँच बोरा चिट बरामद भयो । दुबै परीक्षा केन्द्रबाट डेक्समै गेसपेपर तथा चिट राखेर खुलेयाम चोरी गरिरहेका करिब २५ जना विद्यार्थीको शिक्षा अधिकारी कर्णले काँपी खोसेका थिए ।
परीक्षा केन्द्रमा नक्कली गार्डहरु समेत फेला परेका छन् । ल.ल.कु. मावि गार्ड बसेका रामकृष्ण गुप्ता नक्कली रहेको थाहा पाएपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारी कर्णले बाहिर उनलाई बाहिर निकाल्यो । उनले विद्यार्थीलाई चिट चोराउन निजी उच्च माविले राख्न लगाएका थिए । विद्यालय प्रसाशनदेखि विद्यार्थीहरु समेतलाई आन्दोलनको माहौलले वेथिति गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यातायात बन्दको कारण यातायात नचलेपछि परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्न साधन नभएका कारण धेरै विद्यार्थीहरुको परीक्षा छुटेको छ । सिरहाको लहानस्थित पशुपति आदर्श उच्च मा.वि. परीक्षा केन्द्रमा ४ सय ८३ विद्यार्थीहरुले परीक्षा दिनु पर्नेमा २९ जना अनुपस्थित देखियो । त्यसैगरी ल.ल. कु मा.वि. लहान परीक्षा केन्द्रमा पनि करिब २५ जना विद्यार्थी अनुपस्थित भए । टाढा घर हुने विद्यार्थीहरु यातायातको साधन विना परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्न नसकेपछि परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका छन् ।
ल.ल.कु.उच्च मावि परीक्षा केन्द्रमा एउटा डेक्समा चार जना विद्यार्थी राखेर परीक्षा लिइरहेको पाइयो । एउटा डेक्समा २ जना परीक्षार्थीलाई मात्र राख्न पाउने व्यवस्था छ । चार जना परीक्षार्थीलाई एउटै डेक्समा राखेर परीक्षा लिँदा एकले अर्काको काँपी सार्ने गरेको भेटियो । तर परीक्षार्थीको संख्या बढेको र डेक्स बेन्चको अभाव भएका कारण एउटै डेक्समा ४ जनालाई बसाउनुपरेको बताएको छ । परीक्षा संचालका लागि सधैं एउटै गार्डलाई राख्नुपर्ने हुन्छ । तर सिरहाका निजी विद्यालयहरुले आफ्नो विद्यार्थीको बढी मार्क ल्याउनका लागि सुपरिडेन्टलाई रकम खुवाएर दिनहुँ विषयगत शिक्षकलाई गार्ड राख्ने गरेको स्रोतको दावी छ । शिक्षा अधिकारी कर्णले विहीबार राखेकै गार्डलाई सधै राख्न निर्देशन दिँदै गार्ड परिवर्तन भएको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सिरहामा कुल ३९ वटा उच्च मावि संचालनमा रहेको छ । ति उच्च माविबाट नियमित ४ हजार ७०३ र आंशिक १ हजार ५५२ गरी कूल ६ हजार २५५ विद्यार्थी कक्षा ११ को परीक्षा दिदैछन् । परीक्षाका लागि १२ वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ ।